Ndeipi pfungwa dzakakwana pakuvaka mushandirapamwe wokutsvaga Internet?
Nenguva imwe neimwe unoda kukurudzira bhizinesi rako pawebhu iwe unofanirwa kutungamira mutsva wokutsvaga kambani yekutsvaga yeInternet. Izvo hazviiti kuti zvive pachena kana iwe uchida kukurudzira ichangobva kutanga purojekiti kana kuti kuvandudza kuonekwa kweiyo online kunogara kwenguva refu, mumatambudziko ose iwe unofanira kutanga neInternet marketing campaign yako. Iyo ndiyo nzira yakakwana yekukwezva vatengi vatsva uye kuwana nguva dzose kufamba kwemashamba kunharaunda yako.
Kushambadzira kwakanyanya inzira inoshandiswa yekutsvakurudza iyo inoreva kugadzira zvakanakisisa zvewebhu yehupenyu izvo zvichaita kuti vashandisi vatarise uye vagozvibatanidza nemashoko anogona kubatsira kugadzirisa nyaya dzavo. Inoshanda zvakanyanya kudarika kutonhora kudana uye mamwe marudzi ekubudiswa kwekutsvaga kunze uye kushamwaridzana nevateereri vanotarirwa. Kuti ubudirire munyika yeInternet uye uite kuti bhizinesi rako ribudirire, unofanirwa kushandisa yako yose nhijito dzedhijiti dzakadai sewebsite, blog, social media account kana e-mail list. Zvose izvi zvingakubatsira kuti utsvake vatengesi vako uye ugovaita kuti zvive nguva dzose.
Muchikamu chino, tichakurukura dzimwe mazano anokosha maitiro ekuvandudza nzira inobudirira yekudhinda yekuita kuti bhizinesi rako rekutsvaga rive rakabudirira uye kaviri mari yako.
Mirayiridzo yekugadzira mushandirapamwe wekushambadzira weInternet
Unotanga kutanga kusimbisa purogiramu yako yekutengeswa kweInternet nekugadzirisa zvinangwa zvakanaka. Pane zvinangwa zvishanu zvakakosha zvebhizimisi rimwe nerimwe-rakananga, rinogona kuenzaniswa, rinogoneka, rinokwanisika uye rinosunga nguva.
Zvakakosha kuziva zvinokwanisika uye zvinobudirira zvebhizimisi rako rekutenga usati watanga kuvaka chirongwa chekudisa. Kana uine pfungwa dzisinganzwisisiki kana dzisinganzwisisiki, hadzizombozadzike uye iwe uchanetseka uye haugone kufunga nezvekuwana kwawakagamuchira kare.
Ndicho chikonzero zvinangwa zvako zvinogona kuvimba nehuwandu hwekutsvaga webhusaiti. Maketeri enyu webhutaneti achakubatsira kuti uone zvinoshanda zvechinangwa chako chokupedzisira.
Sekutonga, havasi vatengi vose vanosikwa vakaenzana. Iwe unofanirwa kuisa pfungwa pane avo vanozowana kukosha mune zvigadzirwa zvako kana mahutano uye zvinowanzova mutungamiri wako. Usashatisa nguva yako pane imwe nguva-vatengi vanouya kune web site yako nguva nenguva. Kuvaka mukunda wekutsvaga kweInternet, unoda kutarisa rudzi rumwe chete rwevatengi. Kuti unzwisise kuti ndiani angangodaro vatengi, iwe unofanirwa kutsanangura dheyo pamusoro pavo. Somuenzaniso, mararamiro avo, mazita evanhu uye mamwe matanho chaiwo. Isa pamwe chete izvi zvose zvinyorwa kuti uone mufananidzo wose wevateereri vako. Nokuita izvi, iwe uchanzwisisa matambudziko avo uye zvido zvavo.
Ipai vashandi venyu zvavanoda chaizvo
uye zvinetso zvipi zvavari nazvo, zvino yava nguva yekuvapa nechipo chavanenge vachida kuti muvekwe. Iwe unofanirwa kuumba zvakakosha kune zvaunogona kukwanisa kuita vashandi zvinogadzirisa kugadzirisa matambudziko avo nekuita kuti vave vakavimbika kumakiti enyu. Nokugadzirisa zvakagadzirwa nehutano, iwe unotungamira vashandi vepawebsite yako muchikamu chinotevera chekutengesa funnel. Iwe unogona kupa vhidhiyo nzira-kana kuti nhanho-ne-nhungamiro yekutsvaga kuti uende mberi navo mugwara ravatengi vavo Source .